MUQDISHO, Soomaaliya - Maxbuuskaan oo ku jiray Xabsiga dhexe ee Xamar, ayaa waxaa lagu magacaabayay Burhaan Cali Jimcaale, sida ay Warsidaha Garowe Online u sheegeen saraakiil ka tirsan Xabsiga.
Marxuum Jimcaale ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiray Xabsiga tan 2014-kii, islamarkaana lagu xukumay Xabsi daa'in, inkastoo uu mudooyinkii dambe ahaa qof xanuunsanayay.
Sida uu xaqiijiyay Maxamed Cumar oo ah taliyaha Xabsiga dhexe ee Xamar, Marxuumka waxaa laga helay cudurka TP-da, kaasoo uu tilmaamay inay wadeen maalmihii udambeeyay sidii ay uga wayn lahaayeen.
"Geeridu waa xaq. Inaga ahaan, waan sameynay dadaalo si aan wax uga qabano xaaladiisa caafimaad, waxaana laga helay cudurka TP-da," ayuu Taliye Cumar u sheegay warbaahinta Muqdisho.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Marxuumka la filayo in meydkiisa lagu wareejiyo qoyskiisa si ay u aastaan, inkasta oo laga yaabo inay aasaan saraakiisha Xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Ma cadda dambiga lagu soo eedeeyay Burhaan Cali Jimcaale ee loogu xukumay Xabsi daa'inka, iyadoo mar wax laga weydiiyay taliye Maxamed Cumar arrinkaas uu ka gaabsaday.
Ma ahan markii ugu horeysay oo xabsiga dhexe ee Xamar uu ku dhex-dhinto Maxbuus, maadaama horey looga soo wariyay kiisas noocaan ah, kuwaasoo ahaa in Muxbuus ay ugu dhinteen xanuuno haleelay, oo la daaweyn karo.
Xabsiga dhexe ee Muqdisho oo ay ku xiran yihiin dad badan oo Maxkamadaha dowladda ku riday xukunno kale duwan, oo isugu jira; falal argagixiso, xatooyo iyo eedaymo kale, ayaanan lahayn adeeg caafimaad oo wanaagsan, oo loo fidiyo maxaabiista xanuunsan.
Bangiga Horumarinta Africa ayaa mashruucan ugu tala-galay in lagu horumariyo dhulka...
Farmaajo oo Baydhabo ka furaya Shirka Amniga Qaranka
Soomaliya 04.06.2018. 10:50
DFS oo ka gaabisay xal u helista Masjid mudo u xiran khilaaf [DAAWO]
Soomaliya 20.10.2018. 23:35
Bankiga Dhiiga ee Somalia oo dib loo howlgelinayo [Daawo]
Soomaliya 29.01.2019. 09:09
Soomaaliya: Farmaajo oo ku Dhawaaqey Baroordiiq, Faahfaahin Qaraxa Muqdisho
Soomaliya 15.10.2017. 01:28
​Farmajo oo la kulmay Qurba-joog u timid Shir fashilmay
Soomaliya 10.10.2017. 16:48
Farmaajo oo shaaciyey caqabad hortaag-nayd qabyo-tirka dastuurka
Soomaliya 30.07.2019. 17:44